Antsirabe: Mitaky ny fialan’ny ny AMETIS ny mpiasan’ny hetra
mercredi, 13 juin 2018 11:50
“Ndao mba hiaraka aminay, hiaraka hanala an’i Bebe”, io no hirahiran’ireo mpandraharahan’ny hetra eto Antsirabe nandritra ny diabe nataon’izy ireo, ny marainan’ity alarobia 13 jona 2018 ity.
Mbola fanamafisana ny fitakiana sendikaly ataon’ny mpiasa no atao raha ny fanazavan’ny solontenan’ireo mpiasa, Rakotomahefa Tantelinirina. Nambarany fa tsy miditra politika izy ireo nefa kosa ny famerenana ny asan’izy ireo nomena ny orinasa tsy miankina AMETIS no antony.
Nambaran’izy ireo fa raha fahaizamanao dia manana ireo mpiasa izay ao amin’ny hetra. Efa nisy fifampidinihana saingy nasaina nanao fitoriana fotsiny izy ireo. Namafisiny fa tsy ara-dalàna ny nametrahana io orinasa io satria ny fifanaraham-piarahamiasa no nandeha alohan’ny antso tolobarom-panjakana.
Nambaran-dRakotomahefa Tantelinirina fa rehefa tsy mandray andraikitra ny Minisitra dia ny miala no mety aminy. Hitohy ary hihamafy ny hetsika hoy ity mpitarika ity raha toa ka tsy miala tanteraka ny AMETIS, satria raha nipetrapetraka tao amin’ny Birao ihany izy ireo teo aloha dia hanidy trano tanteraka manomboka izao.